Wonke umfazi ufuna ukubonakala njengekhulu leepesenti kwi-Eva yoNyaka omtsha. Kukho isibonakaliso esinjalo - indlela yokubhiyozela uNyaka omtsha, ngoko uya kuwuchitha. Ngoko kufuneka ukhangeleke ukungahambikiyo kule holide.
Njani kwezinye iiveki ezimbalwa ukuzibeka phantsi? Ngaba kunokwenzeka ukwenza oku ngexesha elifutshane? Akukho nto engenakwenzeka, loo ntokazi iya kuthi. Ngoko ke kufuneka kwenziwe ntoni?
Ukuba awuhambanga kwi-gym, ke sekuyisikhathi sokuqala i-aerobics. Inokwenziwa ekhaya. Ngoku kwi-intanethi ungayifumana inkqubo enempilo yokufumana impilo, enokuphela kweentsuku ezili-10 izakuzisa kule fomu (ukuba ikhefu elingaphezulu lidlula i-10 kg). zilungiselele uqeqesho olunzulu amaxesha amane ngeveki. Musa uvila! Ungakwazi ukufezekisa iziphumo njengoko uhambele iholo.
Okokuqala, kufuneka uqinise umzimba wakho wokhuseleko lomzimba. Iipresprinimat iivithamini, kwaye mhlawumbi i-multivitamines. Nika ingqalelo kwiqela le-vitamin B, inomphumela onenzuzo kwesikhumba, kwiinwele kunye nakhonkwane. Ubuhle budinga i vithamini! Emva koko, ngokutya, asifumani zonke iivithamini eziyimfuneko. Ngenxa yedvenedeli siya kuphucula imeko yesikhumba sethu.
Ukongeza kwi-vitamin, yidla imifuno kunye neziqhamo. Okona luncedo kakhulu ebusika i-broccoli, ithanga, iidipefruit, i-oranges, i-lemons, i-persimmons, njl. Musa ukulibala ukutya. Ukutya okufakwe kakuhle kuya kuphucula impilo.
Yiba nexesha lokujongana nokujongana. Iikhemikhali elungileyo (i-multi-acid okanye i-glycolic). Inkambo yokupasa i-5 sessy.Rekomendovano idlula kunye ne-mesotherapy. Ikhosi, eya kuba yinkqubo ezili-10. Emva kweenkqubo ezimbalwa, uza kubona iziphumo ezintle. Ulusu lwakho luya kukhula ngakumbi, kwaye umbala walo uya kuphucula. Uyakwazi ukubona ukunyamalala kwamancinci amancinci.
Musa ukuthobela phantsi amandla okulwa ne-cellulite massage. Indlela yokuthatha ixesha lokugqiba iiveki ezimbini zeeveki. Unokuya kwi-hardware okanye isiqulatho. Omnye nomnye unempembelelo enhle. Iziphumo ziya kubonakala emva kweenkqubo ezili-10.
Ukongeza kwi-massage, kucetyiswa ukuba uqale ukugubungela. Kwiinkqubo ezili-10, amaninzi amantombazana ahlambulule aze ahlambuluke kwi-5 cm emagqabini nasezinqeni. Ukuba uyazihlaziya kwaye udibanisa kwinkimbinkimbi, ke umphumo uya kuba yinto.
Izigulane zobuso obuhle
Iilenki zobuhle zikhethwa ngabasetyhini abadala. Amantombazana amancinci ayenzi oku. Ukulungiswa kwe-acaluronic acid kuya kunceda ukuphucula isikhumba, unike ithowuni, ukuphucula ubuso obushushu. Isiphumo siya kuba emva kweseshoni yokuqala. Inkqubo yokugqibela kufuneka yenziwe iveki enye ngaphambi koNyaka omtsha. Emva koko ukutsalwa kwezijokelelo akuyi kubonakala.
Abasetyhini abaneenkomfa ezinzulu, basebenzise izitya kunye ne-botulinum toxin. I-Cosmetologists icebisa ukwenza iinkophe ngokungenasenzo. Ukuzaliswa kokuqala, kwaye emva kwexesha kunye neBotox. Ikhefu phakathi kweenkqubo yiveki. Ngelo xesha kulungile ukuyeka utywala nokutshaya.
Ubumnandi bonyaka obutsha obugqibeleleyo
Okokuqala, ngaphambi koNyaka omtsha kubalulekile ukubuyisela iinwele ezinobungozi. Baya kufuna unyango olunzulu. Kufuneka uyiqale kanye okanye kabini ngeveki ngaphambi koNyaka omtsha. Inkqubo yokubuyisela iquka ii-masks ezineoli zendalo, i-collagen, isondlo sezinwele zeenwele, intloko ye-massage yokujikeleza kwegazi.
Sitshintsha i-hairdress, sihlaziya izinwele. Oku kuhle kakhulu ukwenza iveki ngaphambi koNyaka omtsha. Ukuba nexesha lokutshintsha ukuba awuyithandi. Sitshintsha umfanekiso wethu. Kwaye sigubha uNyaka omtsha ngomnye umntu.
Iibhola ezifanelekileyo kakhulu zeNyaka omtsha
I-hairstyle enhle yoNyaka omtsha ibaluleke kakhulu. Emva kwakho konke, uyintombazana enhle, kwaye kufuneka ukhangeleke kakhulu. Cinga ngomfanekiso wakho. Sithetha encinci malunga nesitokethi seeholide, esiya kubakho ngoNyaka woNyaka omtsha.
Kuba luvila - unokwazi ukulungisa iingwele kwaye ufumane izixhobo ezintle. I-trendy trends kweli xesha lixesha elide. Imfashini ngoku kunye nezixhobo kwi style-20. Ngoko sikhetha i-tiaras kunye nesidoda, iinwele zeenwele ezinamatye amahle, iiplanga, iiparele.
Ukubetha ngeenwele ezinde
Kuya kukhangeka ukwenza ama-curls amahle, amaza athile amancinci, amakhanda ahlambulukileyo kunye aphantsi, iigobols, i-braids braids. Iingcamango zingacatshungulwa.
Gcoba iinwele ezinqamle emsila okanye ngasemva kwentloko. Izinwele ziya kufakwa kunye nebhanki ye-raber. Kukulungele ukuthatha i-roller ekhethekileyo ukwenza i-bulk laying. Gweba kakuhle iinwele phezu kwayo kwaye uyibhenqe kwibhendi e-elastic. Gcina zonke iinwele zeenwele kunye neenwele ze-rasperebit ukuze ugubungele i-roller. Ukubeka kuyimfuneko ukulungisa kunye neentsimbi zeenwele kunye ne-varnish.
Ukufakwa kwesitoreji ubude obude
Amantombazana aphakathi kweenwele eziphakathi ubude babengamahle kakhulu kuninzi. Zininzi iindlela zokuziguqula wena ngekhanda. Isitayela se-retro siya kuba nefanelekileyo - amaza akhanyayo, iinqanawa, iintambo ezithambileyo, iihashe.
Intloko yam ilungile. Ngeenwele ezimanzi senza i-foam kwaye sibomise. Sinyusa iinwele kwiintonga. Kubalulekile ukwahlula iinwele kwi-iqonde (ngqo). Ukusuka etempileni thabatha intloko yeenwele uze uphenduke kwi-tourniquet. Ukuyibamba kwi-occipital inxalenye engabonakaliyo. Senza okufanayo ngaphesheya. Siyafafaza ngamanzi size sihombise indawo kunye ne-scallops engabonakaliyo.
Ukubetha ngeenwele ezimfutshane
Kwizinwele ezicocekileyo, sisebenzisa i-gel yokubhala. Ngoku kwahlukana ukuhlukana. Sisasaza umtshangatshini owodwa ukusuka ekuhlukeni ukuya kwicala. Umtsalane ngamnye kufuneka ulungiswe ngokungabonakali. Kwaye kwelinye icala leenwele zidibene emva kwendlebe yakho. Silindele ukuba iinwele zime kwi-gel kwaye zisuse ukungabonakali. Gcoba iinwele nge-varnish. Siyihobisa iinwele ngeqhokhwe. Ingcamango enkulu yeenwele ezimfutshane.
Umzimba kunye noxanduva lokujongana
Ngoku, ukunakekelwa kwesikhumba umzimba kunye nobuso kufuneka kube nzima. Yaye ungazami izinto ezintsha zokubumba, ukuze ungenayo i-allergies. Musa ukulibala ukuthatha ixesha lolusu lakho nsuku zonke. Kabini ngeveki, yenza i-masochki.
Brovki kunye ne-cilia
Bhalisa kwangaphambili ukulungiswa kweelishi kunye ne-eyelashes. Vumela ochwepheshe ukuba abeke umnqweno wokugqiba umfanekiso wakho. Konke okufuneka ukuba ubhalise kwangaphambili, ngaphambi komnyaka omtsha, wonke umntu uya kuxakeka. Ukulungiswa kunye nombala kufuneka kwenziwe kwimihla eyi-10 phambi kweeholide. Kwaye kuya kuba nexesha lokuthabatha imfuneko yokwenza umculi wokwenza. Andililibaleki malunga nokucoca kunye nokuhamba.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ubuthongo obuhle. Asiyikulibala ukulala ngokwaneleyo, ngaphandle koko yonke imisebenzi iya kuphumelela. Emva kwakho konke, umzimba kufuneka uphumule kwimpikiswano yansuku zonke kwaye ube nokuma phambi kweeholide. Unomnyaka omtsha omtsha!
Indlela yokukhawuleza ukulahla ii-freckles
Wonke amabhinqa amaphupha abukeka ubuso bakhe bubukeka bumnandi.
Ukuba umyeni ufuna ukuhamba ... Bamba okanye uvumeleke?
Indlela yokunciphisa umzimba ngaphandle kokwenza imizamo ekhethekileyo?
Konke okufuneka ukwazi nge-soy sauce
Ukwakhiwa kwebuso - ulutsha olungunaphakade lolusu
Inkukhu kwi-citrus-mustard marinade
Ubundlobongela besifazane kunye nezizathu zalo
Iindlela zokuphucula isimo sengqondo kunye nentlalo-ntle